रहेनन् चर्चित बैज्ञानिक हकिन्स | mulkhabar.com
March 14, 2018 | 1:28 pm 154 Hits
शरीरका अधिकांश भाग नचल्दा पनि विश्वका चर्चित बैज्ञानिक बन्न्न सफल बैज्ञानिक स्टीफन हकिङ अस्ताएका छन् । उनको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । हकिङको जन्म बेलायतमा ८ जनवरी १९४२ मा भएको थियो ।
स्टीफन हकिङ्ग न्युटनपछिका ठूलो बैज्ञानिक मानिन्छन् । ब्याक होल पत्ता लगाएका उनलाई खगोलशास्त्रका चर्चित बैज्ञानिक मानिन्छ । विमारीका कारण उनको शरीरको थुप्रै भाग चल्दैनथ्यो ।
उनको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ किताब चर्चित छ । यो सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तक मानिन्छ । उनलाई अमेरिकाले सबैभन्दा उच्च नागरिक सम्मान दिएको छ ।
उनी ह्वीलचेयरमा हिँडडुल गर्थे । उनलाई २१ वर्षको उमेरमा डाक्टरहरुले मोटर न्युरोन नामक बिरामी भएको जानकारी दिएका थिए । उनी हकिङ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक ब्रम्हाण्ड विज्ञान केन्द्रका शोध निर्देशक समेत थिए ।
उनी व्हीलचियरको सहारा लिएर भ्वाइस सिन्थोसाइजरको सहाराले मात्र बोल्थे ।
हकिङले पारवाणिक युद्धको जोखिम र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको आयुमा चुनौति थपिरहेको पटक(पटक बताउने गरेका थिए ।
हकिन्सको निधनले विश्वले एउटा महान् वैज्ञानिक गुमाएको छ । उनको स्मरण विश्वभर सधैं भइरहनेछ । उनलाई विश्वभरका सबल र दुर्बल सबैले युगौं युगसम्म प्रेरणाको श्रोतको रुपमा लिइरहनेछन् ।
Stephen William Hawking CH CBE FRS FRSA (/ˈstiːvən ˈhɔːkɪŋ/ ( listen); 8 January 1942 – 14 March 2018) was an English theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge. His scientific works includeacollaboration with Roger Penrose on gravitational singularity theorems in the framework of general relativity and the theoretical prediction that black holes emit radiation, often called Hawking radiation. Hawking was the first to set outatheory of cosmology explained byaunion of the general theory of relativity and quantum mechanics. He wasavigorous supporter of the many-worlds interpretation of quantum mechanics.